Kalitaon'ny famokarana PCB - Pandawill Technology Co., Ltd.
Ny kalitao no ahiahinay voalohany. Ny fanomezana vokatra tsara kalitao indrindra sy ny fangatahan'ny mpanjifa mahafa-po tanteraka dia miorim-paka ao an-tsain'ny tsirairay ao Pandawill. Manomboka izany raha vantany vao tonga ny angon-drakitrao ary maharitra hatramin'ny aorian'ny varotra. Ny fanaraha-maso ny kalitao dia ahitana ampahany telo:
Fanaraha-maso kalitao miditra
Ity dingana ity dia ny fanaraha-maso ny mpamatsy, ny fanamarinana ireo fitaovana tonga, ary ny fikirakirana ny olana kalitao alohan'ny famokarana.
Ireo mpamatsy lehibe anay dia misy:
Ink: Nanya, Taiyo.
Fanaraha-maso sy fanandramana kalitao ao anaty
Manomboka amin'ny fanomanana torolàlana momba ny famokarana (MI), amin'ny alàlan'ny fizahana fizahana, hatramin'ny fitsirihana farany, ny fifehezana kalitao ny takelaka vita pirinty vita pirinty dia lohahevitra miverimberina amin'ny rafitra famokarana iray manontolo.
Na dia azo antoka aza ny fahamendrehana sy ny fametrahana ny dingana fanodinana simika sy mekanika amin'ny alàlan'ny fandinihana voarakitra an-tsoratra mandritra ny dingana miaraka amin'ny fepetra fikojakojana, na izany aza, ny tabilao isaky ny faritra dia iharan'ny fitsapana maharitra sy maharitra. Izany dia miantoka fa ny loharanom-pahadisoana mety ho hita haingana sy voavaha maharitra. Hizaha ireo takelaka boribory mifanohitra amin'ireo takiana avo lenta ao amin'ny kilasy faha-2 IPC-A-6012.
Ny fizahana sy fitsapana dia misy:
> Fanamarinana ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa (DRC - Check Rule Design)
> Fitsapana elektronika: volavola kely voamarina amin'ny famotopotorana manidina sy ho an'ny andiany lehibe kokoa amin'ny fiasa E-Test.
> Fanaraha-maso optika mandeha ho azy: manamarina ny sarin'ilay mpanara-maso efa vita ho an'ny fiviliana avy amin'ny Gerber ary mahita lesoka izay mety tsy ho hitan'ny E-Test.
> X-Ray: fantaro sy ahitsy ny famindrana sosona ary ny lavaka fandavahana amin'ny fizotran-draharaha.
> Fanapahana fanapahana ho an'ny fanadihadiana
> Fitsapana fahatairana maharitra
> Fanadihadiana mikraoba
> Fitsapana farany amin'ny herinaratra
Fiantohana kalitao mivoaka
Ity no dingana farany alohan'ny andefasan'ny vokatra ny mpanjifa. Zava-dehibe rehetra izy io mba hahazoana antoka fa tsy misy kilema ny fandefasana anay.
Anisan'izany ny fomba:
> Fanaraha-maso farany ny takelaka boribory
> Fonosana vakum ary asio tombo-kase ao anaty boaty ho an'ny fandefasana.